ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Wed Sep 28, 08:35:00 PM GMT+8
ဗျို့ သေတ္တာကြီး၂လုံးထဲမှာ ညီမအတွကိ လက်ဆောင်ပါလာတယ် မဟုတ်လား
ဒါကြောင့် စောစောစီးစီး လာတန်းစီပါတယ်း)
အကြာကြီးစောင့်ရမှာစိုးလို့ ထမင်းထုပ်လေးပါ ဆွဲခဲ့တယ်..
စိနတိုင်းရောက် အတွေ့အကြုံများကို ဆက်လက်စောင့်မျှော်လျှက်ပါ....
မဒမ်ကိုး Wed Sep 28, 09:00:00 PM GMT+8
ဒိုးကန်ဖို့ရောမပါလားမမရေ .ဒါကြောင့်ဒိုးကန်မွေးနေ့ကပျောက်နေတာကိုးးးးး ဆက်တင်ပါ ဆက်တင်ပါ
အပြုံးပန်း Wed Sep 28, 09:41:00 PM GMT+8
Great wall ကြည့်ချင်လှပြီ။
mstint Wed Sep 28, 09:45:00 PM GMT+8
မုန့်တွေပါတယ်ဆိုတော့ စာစောစီးစီးလာလည်မိလို့ တော်ပါသေးတယ်း)
ဗဟုသုတတွေဆက်ဖတ်ဘို့ မျှော်နေမယ် မချစ်ရေ။
Nyi Linn Thit Wed Sep 28, 09:45:00 PM GMT+8
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုတော့ စပြီပေါ့လေ..၊း) CPI ရုံးရော.. လည်တဲ့အထဲမှာ ပါသေးလား? ရှေ့ဆက်မယ့် ဂီယာနံပါတ် ၂၊၃၊၄ ပို့စ်တွေကို မျှော်နေမယ်ဗျို့...။းD
ညိမ်းနိုင် Wed Sep 28, 10:14:00 PM GMT+8
လား....၊ကြည့်ရတာ စလုံးက ဘလော့ဂါတွေကို လက်
မိုးငွေ့...... Wed Sep 28, 10:19:00 PM GMT+8
ဟဲ...ညီမလေးအတွက် မုန့်ပုံတွေအရင်တင်ပေးတယ် ချစ်မကြီး မွမွ....။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Wed Sep 28, 10:27:00 PM GMT+8
“အပ်က စလို့ ဒုံးပျံအထိ အတုလုပ်နိူင်လွန်းကြသူများမို့” တဲ့ အဲဒီစကားလုံးလေး သဘောကျလို့း)
ကျုပ်တို့ရဲ့ ပေါက်ဖော်ကြီးတွေကိုများ ပြောသွားလိုက်တာ ဟွင်းဟွင်း.. လုံးဝကို မခံနိုင်ဘူး
blackroze Wed Sep 28, 11:25:00 PM GMT+8
Nyi Linn Thit Thu Sep 29, 03:20:00 AM GMT+8
ဟုတ်ပြီ၊ ဟုတ်ပြီ ဆိုပြီး အထုပ်ဖြည်တော့ တရုတ်ပြည် ကလာတဲ့ ပရုတ်ဆီတွေ ဖြစ်နေတာကိုး...အဟဲ၊းD
ဝေလင်း ( Вэй Линн) Thu Sep 29, 06:27:00 AM GMT+8
သက်ဝေ Thu Sep 29, 09:03:00 AM GMT+8
ဝယ်လာတဲ့ မုန့်တွေ ချန်ထားအုံးနော်... ဟွန့်... :D :D :D
အင်ကြင်းသန့် Thu Sep 29, 12:33:00 PM GMT+8
sonata-cantata Thu Sep 29, 12:39:00 PM GMT+8
ဂရိတ်ဝေါပေါ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ စာတွေ တန်းစီတင်ပါ
Shwe Zin Oo's Blog Thu Sep 29, 04:16:00 PM GMT+8
အိတ်ကြီးထဲက စန့်စန့်ကြီးတွေကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ် အပိုင်း ဘယ်လောက်မှာ ဇာတ်သိမ်းမှာလဲဗျို့
မြသွေးနီ Thu Sep 29, 04:56:00 PM GMT+8
ခရီးရောက်မဆိုက် ဘလော့ဂင်ပြီပေါ့ အစ်မချစ်ရေ...။
တရုပ်စာ ညည်းငွေ့လာတယ်ဆိုလို့ အံ့သြနေတယ်။ မြသွေးထင်ထားတာက တရုပ်စာက တော်တေ်ာများများ ကြိုက်ကြတယ်လေနော်..။ ၀ယ်လာတဲ့ မုန့်တွေက သွားရည်ယိုချင်စရာ..။ တိုးဂိုက်ပြောတဲ့ many many stars လေးကို သဘောကျသွားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တရုပ်မှာ ခြေရာချန်ခဲ့ဖြစ်သွားတာ အားကျတယ်။ အပိုင်း(၂) မျှော်နေမယ်အစ်မရေ..။
SHWE ZIN U Thu Sep 29, 07:40:00 PM GMT+8
ဝယ်လည်း ဝယ်နိုင်တဲ့ ဒေါ်ချစ်ကြည်အေး ပါလား
မုံတွေ က စားချင်စရာ
An Asian Tour Operator Thu Sep 29, 07:41:00 PM GMT+8
အမချစ်ရဲ့ "ဘ၀ခြင်းမတူသည့် တရုတ်ပြည်" အတွေ့ အကြုံလေးတွေဆက်ပါဦးဗျို့...........။ စိနပြန်လက်ဆောင် ကိုတော့ စင်္ကာပူကို လာယူမယ်။ :))
Mar Mar Lwin Thu Sep 29, 10:15:00 PM GMT+8
မာမာ့ရဲ့ တစ်နေ့တာ Blog လေးကို စိတ်ပါဝင်စားတဲ့
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ ဖတ်နိုင်ပါတယ်နော်။
ညီရဲသစ် Fri Sep 30, 12:41:00 AM GMT+8
ပြည်ကြီး တရုတ်တွေကတော့ စကားပြောရင် အမြှောက်ပစ်တဲ့ အတိုင်းပြောတာ...
နားတွေကို အူတက်လာလို့ တိုးတိုးပြောပါပြောရတယ်...
ဒါလဲ မရပါဘူး အစ်မရယ်။ ဒါက သူတို့ ဝသီကိုး...
TZA Sat Oct 01, 01:23:00 AM GMT+8
ဒီက အပိုင်း၂ကို မျှော်နေသူပါ.. ဟင်း..
Shinlay Sun Oct 02, 05:58:00 PM GMT+8
နောက်ကျသွားလို့ မုန့် တွေ ကျန်မှကျန်သေးရဲ့လား
ချစ်ကြည်အေး Sun Oct 02, 07:00:00 PM GMT+8
ကော်မန့်ပေးသွားသော ဘလော့ဂ်မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါရှင်....:)))
san htun Tue Feb 21, 12:01:00 PM GMT+8
မုန့် တွေ သားရေယိုသွားတယ် မမချစ်ရေ..